Umaki: macy's | Martech Zone
NgoLwesibili, ngo-Mashi 13, i-2018 NgoMsombuluko, Mashi 12, 2018 UShawn Schwegman
Umncintiswano wezokudayisa unzima kulezi zinsuku. Ngabadlali abakhulu abanjengo-Amazon abaphethe i-e-commerce, izinkampani eziningi zilwela ukuqinisa isikhundla sazo emakethe. Abakhangisi abayinhloko ezinkampanini eziphezulu ze-e-commerce emhlabeni abahlali eceleni nje benethemba lokuthi imikhiqizo yabo izothola ukudonswa. Basebenzisa amasu namasu amasosha e-Art of War ukusunduza imikhiqizo yabo ngaphambi kwesitha. Ake sixoxe ngokuthi leli su lisetshenziswa kanjani ukubamba izimakethe… Ngenkathi imikhiqizo evelele ivame
Yini i-Omni-Channel? Kukuthinta kanjani ukuThengisa kule sizini samaholide?
Lwesine, Disemba 17, 2015 NgoMgqibelo, ngoFebhuwari 13, 2021 Douglas Karr
Eminyakeni eyisithupha eyedlule, inselelo enkulu yokukhangisa ku-inthanethi bekuyikhono lokuhlanganisa, ukuqondanisa, bese ulawula imiyalezo kuso sonke isiteshi. Njengoba iziteshi ezintsha zavela futhi zanda ekuthandeni, abathengisi bangeza amaqoqo amaningi nokuqhuma okwengeziwe ohlelweni lwabo lokukhiqiza. Umphumela (osavamile namanje), wawuyinqwaba enkulu yezikhangiso nemiyalezo yokuthengisa eyadonsa wonke umphimbo wethemba. Ukuhlukumezeka kuyaqhubeka - abathengi abacasukile bazikhipha ekubhaliseni futhi bacashe ezinkampanini abazenzayo
Ikusasa Eliqhakazile Lokuthengisa
ULwesibili, April 1, 2014 ULwesibili, April 1, 2014 UKelsey Cox
Yize imikhakha eminingi ibone ukwehla okukhulu emathubeni okuqashwa ngentuthuko kwezobuchwepheshe, amathuba emisebenzi okudayisa njengamanje ayakhuphuka futhi abheke ukuba yisinqumo esiphephile esizayo. Umsebenzi owodwa kwemine e-United States usembonini yezokuthengisa, kepha le mboni ihlanganisa okungaphezulu kakhulu kokuthengisa. Eqinisweni, ngaphezu kwe-40% yezikhundla ezidayiswayo yimisebenzi ngaphandle kokuthengisa. Imisebenzi ephezulu engu-5 ekhulayo